Fahasoavana amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-02 mpandimby ny Magazine > Fahasoavana amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana
Eo am-panoratana ireo andalana ireo aho dia miomana hanatrika ny fandevenana ny dadatoako. Efa elaela izy no nalahelo mafy. Ny andian-teny malaza nataon'i Benjamin Franklin dia malaza: "Zavatra roa eto amin'ity tontolo ity ihany no azo antoka ho antsika: ny fahafatesana sy ny hetra." Efa namoy olona manan-danja maro teo amin’ny fiainako aho; anisan’izany ny raiko. Mbola tsaroako ny nitsidika azy tany amin’ny hopitaly. Nijaly mafy izy ary tsy zakako ny nahita azy nijaly toy izany. Io no fotoana farany nahitako azy velona. Mbola malahelo ihany aho androany fa tsy manana raim-pianakaviana azo iantsoana sy hiarahako amin’ny Fetin’ny Ray intsony. Na izany aza, dia misaotra an’Andriamanitra aho noho ny fahasoavana raisintsika taminy tamin’ny alalan’ny fahafatesana. Avy aminy no ihavian’ny hatsaram-panahin’Andriamanitra sy ny famindram-pony ho an’ny olona rehetra sy ny zavamananaina rehetra. Rehefa nanota i Adama sy Eva, dia nosakanan’Andriamanitra tsy hihinana ny hazon’aina izy ireo. Tiany ho faty izy, fa nahoana? Ny valiny dia izao: Raha mbola nihinana ny hazon’aina izy na dia nanota aza, dia ho velona mandrakizay amin’ny ota sy ny aretina. Raha toa ka voan’ny cirrhose amin’ny aty izy ireo, tahaka ny raiko, dia hiaina mandrakizay ao anatin’ny fanaintainana sy ny aretina. Raha voan'ny kansera izy ireo, dia hijaly mandrakizay tsy misy fanantenana satria tsy hahafaty azy ny homamiadana. Nomen’Andriamanitra antsika ny fahafatesana tamin’ny alalan’ny fahasoavana mba hahafahantsika mandositra ny fanaintainan’ny tany indray andro any. Ny fahafatesana dia tsy sazy noho ny ota, fa fanomezana mitondra ho amin’ny tena fiainana.
« Fa Andriamanitra mamindra fo sy tia antsika fatratra, ka nomeny fiainana vaovao miaraka amin’i Kristy isika izay efa maty noho ny fahotantsika, tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no namonjena anao! Fa niara-nitsangana tamin’i Kristy tamin’ny maty isika, ary isika izao dia miaraka amin’i Jesosy ho any amin’ny fanjakany any an-danitra » (Efes 2,4-6 Baiboly Fiainana Vaovao).
Tonga teto an-tany Jesosy mba hanafaka ny olona amin’ny fonjan’ny fahafatesana. Rehefa niditra tao am-pasana izy, dia niaraka tamin’ny olona rehetra izay niaina sy maty ary ho faty mandrakizay. Efa nokasainy anefa ny hitsanganany avy any am-pasana miaraka amin’ny olona rehetra. Hoy i Paoly: “Raha niara-nitsangana tamin’i Kristy hianareo ankehitriny, dia katsaho ny any ambony, izay itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra.” ( Kolosiana. 3,1).
Ilay fanafody manota
Lazaina amintsika fa rehefa manota isika dia vao mainka miharatsy ny fijalian’izao tontolo izao. Manafohy ny androm-piainan’ny olona Andriamanitra, hoy ny Genesisy: « Ary hoy Jehovah: Tsy hanapaka mandrakizay ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa nofo ihany ny olona. Te-hanome azy roapolo amby zato taona aho mandritra ny androm-piainany ”(1. Mosesy 6,3). Mitantara ny fitarainan’i Mosesy, taona maro tatỳ aoriana, ny amin’ny toetry ny olombelona ny Salamo: “Mavesatra amin’ny ainay ny fahatezeranao, ka dia mihelina toy ny fisentoana. Mety ho fitopolo taona isika, mety ho valopolo mihitsy aza - fa na ny taona tsara indrindra aza dia ezaka sy enta-mavesatra! Haingana dia tapitra ny zava-drehetra ary tsy misy intsony isika » (Salamo 90,9:120f; GN). Nitombo ny ota ary nihena ny androm-piainan’ny olona nanomboka tamin’ny taona, araka ny voarakitra ao amin’ny Genesisy, ho amin’ny taona ambany kokoa. Ny fahotana dia toy ny homamiadana. Ny hany fomba mahomby hiatrehana izany dia ny fandravana azy. Ny fahafatesana dia vokatry ny fahotana. Izany no nitondran’i Jesosy ny otantsika tamin’ny fahafatesany, ary nandravany ny fahotantsika teo amin’ny hazo fijaliana. Amin’ny alalan’ny fahafatesany no iainantsika ny fanafodin’ny ota, ny fitiavany ho fahasoavan’ny fiainana. Tsy misy intsony ny fanindronan’ny fahafatesana satria maty sy nitsangana tamin’ny maty Jesosy.
Noho ny fahafatesan’i Kristy sy ny nitsanganany tamin’ny maty, dia miandrandra amim-pahatokiana ny fitsanganan’ny mpanara-dia azy amin’ny maty isika. “Fa tahaka ny ahafatesan’izy rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’izy rehetra kosa ao amin’i Kristy.” (1. Korintiana 15,22). Misy vokany mahatalanjona izany fiainana izany: “Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masonareo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny voalohany » (Apokalypsy 21,4). Aorian’ny fitsanganana amin’ny maty dia tsy hisy fahafatesana intsony! Noho io fanantenana io dia nanoratra ho an’ny Tesaloniana i Paoly fa tsy tokony halahelo tahaka ny olona tsy manana fanantenana izy ireo: “Fa tsy tianay handao anareo ao amin’ny maizina ho amin’izay efa nodi-mandry ianareo, ry rahalahy malalako. tsy malahelo toy ny hafa tsy manana fanantenana. Fa raha mino isika fa efa maty sy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia ho entiny koa izay efa nodi-mandry taminy tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa izao no lazainay aminareo amin’ny tenin’ny Tompo: isika, izay velona ka mitoetra mandra-pihavin’ny Tompo, dia tsy hialoha izay efa nodi-mandry.”1. Tes 4,13- iray).
Ny fanamaivanana amin'ny fanaintainana
Rehefa malahelo ny fahaverezan'ny olona tiana sy namana isika satria malahelo azy ireo isika dia manantena fa hahita azy ireo any an-danitra indray isika. Toy ny manao veloma ny sakaiza iray izay mandehandeha lavitra any. Tsy ny fahafatesana no farany. Ny fahasoavana no manafaka antsika amin'ny fanaintainana. Rehefa miverina i Jesosy dia tsy misy fahafatesana, tsy misy fanaintainana ary tsy misy alahelo. Afaka misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavan'ny fahafatesana isika rehefa maty ny havana iray. Ahoana kosa ny amin'ireo olona izay tsy maintsy niaritra nandritra ny fotoana ela talohan'ny niantsoana azy ireo any amin'ny fonenany mandrakizay? Maninona no mbola tsy afaka niaina ny fahasoavan'ny fahafatesana izy ireo? Nandao azy ve Andriamanitra? Mazava ho azy fa tsia! Tsy handao na handao antsika mihitsy izy. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra koa ny fijaliana. Jesosy, izay Andriamanitra dia niaritra ny fanaintainan'ny olombelona nandritra ny telopolo taona - niaraka tamin'ny fetrany sy ny fakam-panahy rehetra. Ny fijaliana nampahory indrindra dia ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana.
Mandraisa anjara amin'ny fiainan'i Jesosy
Kristianina maro no tsy mahafantatra fa fitahiana ny fijaliana. Fahasoavana ny fanaintainana sy ny fijaliana, satria amin’ny alalan’ireo no iombonantsika amin’ny fiainan’i Jesosy mampahory: « Ankehitriny dia mifaly amin’ny fahoriana izay niaretako ho anareo aho, ary ny nofoko no andovako ny tenany izay tsy ampy amin’ny fijalian’i Kristy. izany no fiangonana » (Kolosiana 1,24).
Takatr’i Petera ny anjara asan’ny fijaliana eo amin’ny fiainan’ny Kristianina: “Ary satria Kristy nijaly tamin’ny nofo, dia aoka ho fiadianareo izany fanahy izany; fa izay nijaly tamin’ny nofo dia efa niala tamin’ny ota » (1. Petrus 4,1). Mitovy amin’ny an’i Petera ny fiheveran’i Paoly ny fijaliana. Hitan’i Paoly amin’ny maha-izy azy ny fijaliana: fahasoavana hifaliana. « Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny famindram-po sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra, Izay mampionona anay amin’ny fahorianay rehetra, mba hampiononanay izay amin’ny fahoriana rehetra koa amin’ny fampiononana izay nampionona anay. dia avy amin’Andriamanitra. Fa tahaka ny manjo anay ny fijalian'i Kristy no ampiononan'i Kristy anay koa. Fa raha misy fahoriana kosa, dia ho fampiononana sy famonjena izany. Raha manana fampiononana izahay, dia ho fampiononana anareo izany, izay mahomby raha iaretanareo amin’ny faharetana ny fahoriana izay iaretanay koa.”2. Korintiana 1,3- iray).
Zava-dehibe ny fahitana ny fijaliana rehetra araka ny filazan’i Petera izany. Mampahatsiahy antsika izy fa miombona amin’ny fijalian’i Jesosy isika rehefa mahatsapa fanaintainana sy fijaliana tsy ara-drariny «Fa izany no fahasoavana raha misy miaritra ny ratsy sy iharan’ny tsy rariny eo anatrehan’Andriamanitra noho ny fieritreretana. Inona no laza, raha kapohina noho ny asa ratsy sy miaritra amim-paharetana? Fa raha mijaly sy miaritra noho ny asa tsara ianareo, dia fahasoavana avy amin’Andriamanitra izany. Fa izao no niantsoana anareo, satria Kristy koa aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany »1. Petrus 2,19- iray).
Mifaly amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fanaintainana, ny fijaliana ary ny fahafatesana isika. Tahaka an'i Joba, fantatsika koa fa rehefa mahita ny olombelona isika, miaina amin'ny tsy ara-drariny ny aretina sy ny fijaliana, dia tsy nandao an'Andriamanitra isika, fa mijoro eo amintsika ary mifaly ao amintsika.
Raha toa ianao ka mangataka amin’Andriamanitra mba hanala izany aminao ao anatin’ny fahorianao, dia tian’Andriamanitra ho azonao antoka ny fampiononany: “Ampy ho anao anie ny fahasoavako” (2. Korintiana 12,9). Enga anie ianao ho mpampionona ny hafa amin’ny alalan’ny fampiononana niainany ho an’ny tenany.